Usheba ubungoma nokumodela
UZABELO Hlabisa ozibeke ebalazweni lo mhlaba ngokunqoba esikaMiss Cosmos South Africa 2021 Isithombe: SIGCINIWE
Harvest Thwala | November 18, 2021
UKUBA yisangoma kusho izinto ezihlukene kubantu abaningi. Okunye wukuthi kuba nezinto obuzenza phambilini kodwa osuke ungasakwazi ukuzenza. Kepha kunowesifazane omncane waKwaZulu-Natal, owenza okungajwayelekile okokusheba ubungoma nokumodela.
UNksz Zabelo Hlabisa (27) waseNewcastle, usanda kukhethwa njengoMiss Cosmos South Africa 2021, okuyisicoco esihlonishwayo emhlabeni.
Yize eneziqu zasenyuvesi, uZabelo uthi uyakwazi ukukwenza kokubili ngendlela efanele ngoba zombili izipho zisemqoka futhi uyazihlonipha.
“Ngaba nenhlanhla yokuthi idlozi lami lakhuluma nami ngaphambi kokuthi ngiyothwasa. Langitshela ukuthi uma ngilandela yonke imigudu yokuthwasa ngendlela ngaphothula, ngizokwazi ukuphila impilo ejwayelekile. Lokho kwangenza ukuthi ngenhlise umoya ngenze konke okumele ngikwenze njengethwasa ngaze ngaphothula,” kuchaza uZabelo.
UKHUTHAZA abamodelayo ukuthi bangazenyezi ngobuhle bemvelo uZabelo Hlabisa, owine isicoco sikaMiss Cosmos South Africa 2021 Isithombe: SIGCINIWE
Uthe ukhule azi ukuthi unobizo kodwa ubelokhu eziba kwaze kwabe kufika izikhathi zokuthi ahambe, aye kothwasa.
Ngemuva kokuthwasa, wangenela lo mncintiswano ngo-2015 kodwa akuhambanga kahle. Ngokusho kwakhe, uthi wakhishwa inyumbazane ngenxa yokuthi wayenezingcabo ezihlathini ngoba eyisangoma. Akazange alilahle ithemba, ubuye wawungenela kabili futhi umcintiswano ngaphambi kokuthi awine.
“Ngiyazigqaja ngokuthi ngingumelaphi ngoba yinto engayamukela, ngalandela yonke imigudu yakhona. Akulula nakhona, ziningi izinselelo kodwa mina ngizinqobile ngaze ngaphothula. Ngakhokhe angikwazi ukuvumela abantu ukuthi bangehlulele, kube yibo abashoyo ukuthi yini okumele ngiyenze nokungamele ngiyenze. Ngilalela izinto ezakhayo kuphela ezishiwo ngabantu, ezimbi angizilaleli. Ngiyakholelwa ekutheni umelaphi osemncane akafani nosekhulile,” kusho isangoma.
“Ngiyazithanda izinto eziqhakambisa ubu-Afrika nezinto zesintu futhi angikufihli lokho. Uma wamukela ubizo kumele wenze njengoba idlozi lakho lisho, ungabanaki abanye abantu abaseceleni. Uqhubeke noma ngabe abanye abantu bekugxeka,” kusho uZabelo.
Uqhube wathi ukumodela nobungoma kunzima futhi kunezinselelelo zakhona kodwa akazimisele ngokuthi akukodwa kwakho ngoba kokubili uyakuthanda.
“Uma ukwenza lokhu ube wenzela ukuthi bajabule abantu abakuphe isipho sokwelapha kodwa ungakhohlwa ukuthi ngaphandle kokuba yisangoma kukhona impilo. Kumele uzihloniphe uhloniphe abantu, uhloniphe nomhlaba. Akuyona into elula ngoba umhlaba uyahlaba. Ngingomunye wabantu abakholwa ukuthi kumele ngilethe ushintsho kubantu,” kusonga uZabelo, oyisangoma esimodelayo.
Umlingisi nebhizinisi elisha lezimpahla zangaphansi